danna, uMbhali kwi-BikeHike
Kuthatha ixesha elingakanani ukubuyela kumjikelezo we testosterone? Phantse onke amadoda ayenoxinzelelo lwe testosterone lubuyela kwisiqhelo kwiinyanga ezintathu emva kokuphela komjikelo, kwaye
Kufuneka ube nexesha elingakanani umjikelo wakho wokuqala we-steroid? Ngokuqhelekileyo, abasebenzisi baya kuthatha i-steroids kwiiveki ezintandathu ukuya kwiiveki ze-16 ngexesha, zilandelwa ziiveki ezininzi zokuthatha iidosi eziphantsi.
Impendulo emfutshane yokuba ingaba ibhayisekile okanye ayizukuyenza imilenze yakho ibe mikhulu - hayi. Ewe kunjalo, ukukhwela ibhayisekile kuphucula imisipha yomlenze wakho, kodwa njengomsebenzi we-aerobic,
Ewe, iiFitbits zinokulandela umkhondo wakho wokukhwela ibhayisekile usebenzisa itekhnoloji ebizwa ngokuba yiSmartTrack kwaye ziluncedo kakhulu kubakhweli beebhayisikile ngeendlela ezininzi. Enye into eyahlukileyo kwiimveliso ezininzi zeFitbit,
1 2 ... 26,498 Okulandelayo